Zviri nani: Tsvaga, Bvisa uye Deter Dzvanya Kubiridzira | Martech Zone
Chipiri, February 25, 2014 Muvhuro, Kukadzi 24, 2014 Douglas Karr
Dzvanya kubiridzira kunoenderera kuve kwakazara mumubhadharo pabhizimusi rekubaya. Chii chinonzi kubiridzira? Dzvanya kubiridzira inoitika kana munhu, otomatiki script kana chirongwa chekomputa achiteedzera mushandisi zviri pamutemo webhurawuza richidzvanya kushambadziro. Dzvanya kubiridzira kunoitika kuwedzera zvisina kukodzera mari yeiyo saiti yekutambira kana kudhonza iyo mubhadharo pakuki bhajeti yemukwikwidzi. Dzvanya kubiridzira kunoenderera kuve nyaya yemakakatanwa uye kuwedzerwa kwematare nekuda kwenzvimbo dzekushambadzira dziri mubatsiri wekubiridzira.
Mafurati akafanana Zviri nani uine algorithms ekuona, block uye kudzora kubaya kubiridzira. Ongororo dzichangoburwa kubva kuClick Forensics neAnchor Intelligence dzinoti 17-29% yekubaya pamashambadziro akabhadharwa ndeyenhema. Paunenge uchibhadhara zvekubaya, hazvife zvakazoguma neshanduko.
Zviri nani zvinopa zvinotevera maficha
Tsvaga kubiridzira kwekubaya sezvazvinoitika - Paunoteedzera kushambadzira kwako neZvivandudza, iwe zvakare uine yavo yekutarisa system ichiongorora mhando yeese kushambadzira kodhi, maawa makumi maviri nemana pazuva. Kunyangwe kuwedzeredza kusingashandure mabhatani kubva kune dzakananga nyika, kana mukwikwidzi kudzvanya kushambadza kwako, Zviri nani anogona kukuona nekukuzivisa nezve fungidziro yechiito ipapo
Tora mari yakarasika kubva kushambadziro yako yePPC - Pese paunobirwa kubiridzira, Improvely ichagadzirira mushumo nezvose zvaunoda kuti utaure chiitiko ichi kune saiti kana injini yekutsvaga yawakashambadza pairi. Mishumo yekubiridzira inosanganisira iyo IP kero, nzvimbo, zvinongedzera ma URL uye chaiwo mazuva uye nguva dzese dzinofungidzirwa kubaya dzakanyorwa.
Bvisa uye dzivisa kubiridzira kwekubiridzira - Vanokwikwidza uye vanobatana vachitsvaga kushambadza kwako kukweva bhajeti yako vane zvakawanda zvekurasikirwa kana vakabatwa uye vakashumwa. Vavandudza vanoita kuti vazive kuti iwe unoziva nezve chiitiko chavo nekutumira zvinokatyamadza kudzvanya kune yambiro peji pane yako webhusaiti. Isuwo tinokupa yavo IP kero uye mirairo yekuvhara yako Google kana Bing ads kubva pakuratidzwa kwavari mune ramangwana.
Kuzivisa: Tiri kuratidza kubatana kwakabatana mukati meichi blog positi. Iwe unogona zvakare kushandisa Zviri nani neChikamu.io
Tags: baya chitsotsizvirinanikubhadhara pakukandapayperclickppcChikamu.io
Iko Kushambadzira Kwemagariro Kunogona kwe Snapchat